ट्रम्प, क्यू-अनन र 'गहिराइमा सफा गर्दैछ' मिथक (रोबर्ट जेन्सेन, जेनेट ओस्सेबार्ड): मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
ट्रम्प, क्यू-अनन र 'गहिराइमा सफा गर्दैछ' मिथक (रोबर्ट जेन्सेन, जेनेट ओस्सेबार्ड)
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	25 मार्च 2020 मा	• 10 टिप्पणिहरु
जे होस् रॉबर्ट जेन्सेनले हालसालै दक्षिणपन्थी राजनैतिक दलहरूबाट टाढा गरेको जस्तो देखिन्छ, उहाँ अझै पनि ट्रम्पको ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ। उनका भिडियोहरू हालै हेरिएको छ, ठीक नयाँ ताराको जस्ताको तस्तै; एक महिला जसले युएफओहरू र क्रप सर्कलहरूमा विश्वास गर्दछन्: जेनेट ओस्सेबार्ड।
यो युएफओ वा क्रप सर्कलमा विश्वास गर्न आफैमा ठीक छ, तर जहाँसम्म म चिन्तित छु हामी सत्य खोज्नेहरूलाई कल्डरसँग जोड्ने रणनीतिलाई मान्यता दिन्छौं। जेनेसन र ओस्सेबार्ड दुबै डोनल्ड ट्रम्पले विश्व बचाउने विश्वास गर्दछन्। ओस्सेबार्डमा यो अब स्पष्टसँग 'गहिराइमाँट' र 'क्यू अनन' कहानीसँग जोडिएको छ। रोबर्ट जेन्सेनले यसलाई अलि बढी सूक्ष्म रूपमा लिन्छन् किनभने सम्भव भएसम्म त्यो षड्यन्त्र सिद्धान्तसँग सम्बन्धित नहुने सम्भवतः उसले कोशिस गरेको छ।
म तपाईं समझाउन कोशिस गर्दछु किन म विश्वास गर्दछु कि हामी यहाँ सुरक्षा नेट प्यादहरु संग व्यवहार गरिरहेका छौं। म यो मान्छेलाई कालो बनाउन को लागी गरिरहेको छैन, तर कम्तिमा तपाईलाई यस विषयमा फरक दृष्टिकोण दिनको लागि म गरिरहेको छु, ताकि तपाई यसलाई आफ्नो विचारहरुमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ।
ती सुरक्षा नेट प्यादहरू के हुन्?
सेफ्टी नेट प्यादेहरू ती व्यक्ति हुन् जुन सोही उर्जा ब्लकको तर्फबाट हामी सोच्छौं कि हामी मिडियाको पछाडि चिन्न सक्दछौं, वैकल्पिक मिडियामा धेरै प्रख्यात छन् र मिडिया वा सोशल मिडियाबाट कम वा कुनै सेन्सरशिपको अनुभव गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो नेटवर्कमा धेरै वैकल्पिक मिडिया धक्का। मुख्यधारा च्यानलहरू पनि उनीहरूको बारेमा रिपोर्ट गर्छन् (ती नकारात्मक छन् भने पनि: तपाईंलाई ध्यान दिँदा के बढ्छ)। थप रूपमा, तिनीहरू आवश्यक रूपमा दृढ रूपमा समर्थित छन् IMBers र व्यक्तिहरू जो केवल 'राम्रो ध्वनि को कथा' को लागी सामाजिक मिडिया मा।
911 911 ११ पछि, उदाहरणका लागि तपाईसँग अमेरिकामा त्यस्तो कोही थियो; आधिकारिक 911 पढाइको वैकल्पिक दर्शनहरू सुरू गरेर ठूला समर्थकहरू जम्मा गर्ने कोही। चाहे तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न 911 भित्री काम हो। यो ऐस बेकरले among XNUMX ११ आन्तरिक काम हो भनेर विश्वास गर्ने मानिसहरू बीच ठूलो अनुसरण गर्न सफल भयो। उसले सबै प्रकारका थियरीलाई कभर गर्‍यो र उनले खराब कथाहरू हुन् भनेर सोचे। उनी भनेका थिए, 'सत्य आन्दोलन' को अनुहार, जसलाई भनिन्थ्यो।
एक पटक उसको ठूलो अनुसरण गरिसकेपछि, उसले केहि गरे जुन कसैले सोचेन। एक रेडियो कार्यक्रमको क्रममा, उसले अचानक आफ्ना बाबुआमा, पत्नी र बच्चाहरूलाई बिदाइ गर्न शुरू गर्यो र तपाईले बन्दुकको आवाज सुन्नुभयो, त्यसपछि यो चुप भयो र प्रस्तुतकर्ताले भन्यो: "मलाई आशा छ यो सत्य होईन।" धेरै पछि होइन, उही इक्का बेकर फेरी धेरै धेरै जीवित भए। यसैले उनले एक पटकमा 'सत्य आन्दोलन' को विश्वसनीयता उडाए। (सुन्नुहोस् यहाँ टुक्रा)
यद्यपि त्यहाँ अरू धेरै रणनीतिहरू छन्, जस्तै ती 'सत्य आन्दोलन' मा अर्को प्रख्यात नाम पछि 'परमेश्वरका सन्तानहरू' सम्प्रदाय भित्र एक नेताको रूपमा उजागर गरियो; एउटा सम्प्रदाय जसले साना बच्चाहरु संग यौन प्रमोट गर्छ। किनकि यो जेन गार्डनर 'सत्य आन्दोलन' मा धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुनको लागि सक्षम थियो, ती सबै व्यक्तिहरू संक्रमित भए।
धेरै सुरक्षा नेट प्यादहरू सेवाहरू मुख्यतया स्पष्ट सत्य वा स्पष्ट सत्यको घोषणा गर्न प्रयोग गर्दछन्। किनकि तिनीहरू जताततै धकेलेका हुन्छन्, उनीहरू धेरै फलोअरहरू प्राप्त गर्दछन्। हामी रोबर्ट जेन्सेन र जेनेट ओस्सेबार्डसँग पनि त्यस्तै देख्छौं। दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको माछा मार्ने डु boat्गाको रूपमा तिनीहरूले सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई उनीहरूको सुरक्षाको जालमा तान्न सक्दछन्, र त्यसपछि माछा मार्ने डु boat्गालाई एउटा घोटालेमा उडाउँदछन्। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं ती आलोचनात्मक मानिसहरूलाई लाज बनाउन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई अबदेखि मुख्यधारको मिडिया र राजनीतिको साथ अनुरूप चल्नबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ।
गहिराइमा र क्यू अनन सफा गर्दै
दुबै रबर्ट जेन्सेन र जेनेट ओस्सेबार्डले डोनाल्ड ट्रम्पको ठूलो आशा राखेका छन। क्यू अनन षडयन्त्र त्यस्तो व्यक्तिमा आधारित छ जसले एन्क्रिप्टेड सन्देशहरू अनलाइन राख्दछन्, जसले ट्रम्पलाई ड्रप गर्न चाहेको गहिराइसम्म र डोनल्ड ट्रम्प जसले त्यो गहिराइसँग संघर्ष गरिरहेका थिए। अफवाहहरू छन् कि क्यू अनन एक प्रकारको एआई प्रोग्राम हो र मैले यो विकल्प अघिल्लो लेखहरूमा पनि सुझाव दिएँ।
IBM को डीप निलो सुपर कम्प्यूटरले जित्यो 1996 मा अल २०१ champion मा शतरंज र गुगल वर्णमालाको क्वान्टम कम्प्युटरको साथ विश्व च्याम्पियन कास्परोभको सबैभन्दा जटिल खेलको विश्व च्याम्पियन हराउन जानुहोस्। यसैले यो एकदमै प्रशंसनीय छ कि सरकारहरूले मिडिया र वैकल्पिक मिडियाको संयोजनमा उनीहरूको रणनीतिमा सुपर कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्दछन्, जनताको सबै ठूलो डाटा (जुन उनीहरूले वास्तविक समयमा स collect्कलन गर्छन्) सँगसँगै।
तर यसलाई बीचमा छोडिदिनुहोस्। सिद्धान्तमा हामी यो अनुमान गर्न सक्दछौं कि सरकारहरू जान्दछन् कि जनस among्ख्याको बीचमा सदैव विपक्ष हुन्छ। त्यसोभए यदि तिनीहरू आफैंले त्यो विपक्षीको निर्माण गर्न सक्दछन् र ठूलो भीडलाई समात्न सक्छन् भने तिनीहरूले राम्रो गर्नेछन्। Q अनन सुरक्षा सुरक्षा रणनीतिको अंश मात्र हुन सक्छ।
क्यु अनन विचारहरूको उदाहरण मैले हिजोमा प्राप्त गरें। यो सबै धेरै भविष्यसूचक देखिन्छ, त्यसैले यसले यस्तो छाप दिन्छ कि Q वास्तवमै ट्रम्पसँग काम गरिरहेको छ। अरु कसरी थाहा पाउने? केवल पढ्नुहोस्:
दरवाजा: डा। रसल म्याकग्रेगर
सबै अप्रिल १० (गुड फ्राइडे) मा समाप्त नभएसम्म ग्लोबल हाउसको फैसलाहरू जारी रहनेछ। त्यो भन्दा पहिले, १० दिन "अन्धकार" अप्रिल १ को बिहान सुरु हुनेछ, र ती दिनहरू अप्रिल १० मा समाप्त हुनेछ।
'अन्धकार' सुरु हुनुभन्दा ठीक लगत्तै, पोट्सले यस कुराको साथ एउटा ट्वीट पठाउँनेछ: मेरा साथी अमेरिकनहरू ... आँधीबेहरी हामीमाथि आइपुगेको छ ..... "(" मेरा सँगी अमेरिकीहरू ... आँधीबेहरी आइपुगेको छ ... ") 'अप्रिल १' को प्रकृति हुनेछ पहिले "अन्धकार" को देखा पर्ने बारे चिन्ता कम गर्नुहोस्। जब "अन्धकार" देखा पर्दछ, त्यहाँ कोरोनाभाइरस वरपर त्रास र विश्वव्यापी चिकित्सा आपतकालिनमा स्पाइक हुनेछ। यो चिकित्सा आपतकालिन धेरै शहरहरुमा (र देशहरू। भेरिट) अप्रिल १ भन्दा पहिले नै घोषणा गरीनेछ।
धेरै व्यक्तिहरूले आफैंलाई नजरबन्दमा राखेका हुनेछन र धेरैले खाद्यान्न आपूर्ति आदि बनाएका हुन्छन्।
अष्ट्रेलियामा बेरोजगार र रिटायर्डले मार्च 31१ मा $ 750० प्राप्त गर्नेछन्। अन्य देशहरूले पनि यस्ता प्रबन्धहरू बनाउनेछन कि थोरै मात्र मर्ने थिए। केहि आपतकालिन स्टोरहरू अत्यावश्यक सामानहरू बिक्री गर्न खुला रहनेछ, तर प्रायः स्टोरहरू बन्द हुनेछन्।
१० दिनको 'अन्धकार' को बखत कुनै सामाजिक मिडिया वा इन्टरनेट उपलब्ध छैन। त्यहाँ बिजुली हुनेछ, तर रेडियो र टिभी छैन। कुनै समाचार पत्रहरू छापिने छैन। प्रत्येक देशको सेना यी प्रकाशकहरु बन्द हुनेछ।
POTUS सँग 10 दिनको 'अन्धकार' को समयमा मानिसहरू सम्म पुग्नको लागि मात्र उपलब्ध विधि छ र त्यो आपतकालीन प्रसारण प्रणाली मार्फत हुनेछ। विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक सेनाले आफ्नो देशका टिभी र उपकरणहरूमा यो फर्वार्ड गर्दछ।
POTUS विदेशमा, वा बोर्ड एयरफोर्स वनमा, "अन्धकार" को दिनमा हुनेछ। एयरफोर्स वन प्रयोग गर्नका लागि तथाकथित बहाना सुरक्षा र / वा संक्रमण जोखिमको लागि हुनेछ। आपतकालीन प्रसारण प्रणाली एयरफोर्स वनबाट प्रसारण गरिनेछ। त्यसैले त्यहाँ एक प्रभावी समाचार ब्लक हुनेछ, POTUS बाहेक।
व्यावसायिक रूपमा बनाईएको वृत्तचित्रहरू टीभी र अन्य उपकरणहरूमा आपतकालीन प्रसारण प्रणाली मार्फत विश्वव्यापी प्रसारण गरिन्छ। यसका सामग्रीहरूले सबै त्रास, अपराध र सबै चीजको विवरण वर्णन गर्दछ। सामग्री पारिवारिक मैत्री हुनेछ र यो प्रश्न बाहिरको हुनेछ।
पोट्सले वर्णन गरे कि कसरी उनीहरुलाई संयुक्त राज्यको सेनाले डीप स्टेटको रोल अप गर्न भन्यो र ऊ एक "राजनीतिज्ञ" होईन। उसले Q जानकारीको पुष्टि गर्नेछ। यी वृत्तचित्रहरूमा प्रसिद्ध डीप स्टेट राजनीतिज्ञ र कुलीन व्यक्तिहरूको रेकर्ड गरिएको बयानहरू प्रस्तुत गरिनेछ। विश्व नियन्त्रण को संरचना व्याख्या गरिनेछ। अपराधको प्रमाण प्रस्तुत गरिनेछ। सैन्य न्यायाधिकरणको बयान सार्वजनिक गरिनेछ।
यी प्रस्तुतीकरणहरू प्रसारण गरिने छ, एक दिन 8 घण्टा, पूर्ण १० दिनको अवधिमा। पुनरावृत्तिहरू दिनको बाँकी भाग हुनेछ ताकि तिनीहरू अझै पनि काम गरिरहेका छन् र उद्धारकर्ताहरूले केहि पनि छुटाउँदैनन्। यसैले प्रसारणहरू दिनमा २ 10 घण्टा जारी रहनेछ। परिवारहरूले गर्न को लागी केहि गर्नुपर्दैन तर यी हेर्न। सब भन्दा सब भन्दा डरलाग्दो भिडियोहरू सबैका लागि हुनेछैनन्, तिनीहरू जो इन्टरनेटमा १० दिनको 'अन्धकार' पछिको चाहाना द्वारा हेर्न सकिन्छ।
त्यहाँ ठूलो आघात, त्रास र भ्रम हुनेछ। देशभक्तको रूपमा हाम्रो भूमिका शान्त, पुष्टि, अनुकम्पा र आश्वासन प्रदान गर्ने छ। धेरै देशभक्तहरू जो पहिले बोल्न डराएका थिए उनीहरूले हिम्मत गर्छन्।
यस्तो सम्भावना छैन, तर सम्भव छ, कि JFK जूनियर र अरूले अपरेशनको विश्वसनीयतामा योगदान गर्दछ। जब गुड फ्राइडेमा "अन्धकार" को १० दिनहरू समाप्त हुन्छन्, त्यहाँ आध्यात्मिकताको एक विशाल विस्फोट हुनेछ।
गुड फ्राइडेमा, मानवतालाई बताइनेछ कि भाइरस अब सुरक्षित छ र एक बाहिर निस्किन्छ र फेरि सँगै फर्कन सक्छ। चर्चहरू, सभाघरहरू र मस्जिदहरू खचाखच भरिन्छ। त्यहाँ धेरै कष्ट हुनेछ, तर राहत पनि।
एक सानो प्रतिशत, सायद%%, नियन्त्रण बाहिर हुनेछ र सत्य स्वीकार गर्न धेरै टाढा दिमाग धुनेछ। सामान्य रूपमा, तिनीहरू अवरोध पैदा गर्दछन्।
डीप राज्यले सँधैका लागि सबै कुराको नियन्त्रण गुमाउनेछ। सेनाले टेलिभिजन स्टेशनहरू र अखबारका प्रकाशकहरूलाई तोडफोड गर्नबाट जोगाउने छ ब्ल्याकआउट पछि, स्थापित मिडिया पूर्ण रूपमा उजागर हुनेछ र कथालाई खण्डन गर्न सक्षम हुनेछैन।
गहनतामो खाडीमा आत्मसमर्पण नगरेको र निर्वासित नगरिएका गहन राज्य व्यक्तिहरूले अप्रिल ११-१२, २०२० को आत्महत्याको हप्तामा आत्मसमर्पण गर्नेछन्। अनिच्छुकलाई सूचित जनताको बिरूद्ध आफूलाई बचाउन अनुमति दिइनेछ।
अब माथिको फेरि राम्ररी फिट बैठ्छन् गत रातको डोल्ड ट्रम्प प्रेस सम्मेलनले घोषणा गरे कि उनी अमेरिकीहरू इस्टरको समयमा फेरि स्वतन्त्र रूपमा जान र चर्च जान सक्षम होऊन् भन्ने चाहन्थे (हेर्नुहोस्) businessinsider.com)। त्यसोभए क्यू अनन कहानी ट्रम्पले के भन्छ त्यसमा कुनै पनि हिसाबले फिट हुने देखिन्छ, यसले थप विश्वसनीय बनाउँछ। दुबै शिविरहरू खेल्नका लागि सेवाहरू पर्याप्त स्मार्ट छन् भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन।
त्यसोभए रॉबर्ट जेन्सेनमा के गल्ती भयो
तपाईंले मलाई रोबर्ट जेन्सेनमा एक व्यक्तिको रूपमा केही गल्ती भएको भन्ने कुरा सुन्नुहुने छैन। मलाई लाग्छ कि उसले सेफ्टी नेट प्यादाको रूपमा काम गर्दछ र एक प्रशिक्षित मास्टर कम्युनिकेटरको रूपमा उसले सुरक्षा जाल कसरी भर्ने भनेर ठीकसँग जान्दछ। उसको रणनीति अझै क्यू अनन सिद्धान्तको खुल्ला रूपमा घोषणा गर्न सकेको छैन। यद्यपि उनले ट्रम्पको लागि अन्तिम भिडियोमा डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशंसा गरिसकेका छन कि समस्या समस्या भन्दा नराम्रो हुनु हुँदैन।
जेन्सेन जिद्दी गर्छिन् कि कोरोनाभाइरस लकडाउन उपायहरू एकदम कठोर छन् र धेरैजना उनीसँग सहमत हुनेछन्। उनी मृत्युको दर र सम्पूर्ण देशको चापलुसीसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित छन्, आर्थिक प्रभाव सहित। उसले यो पनि पाउँदछ ब्लूमबर्ग कागजात, जुन मैले अघिल्लो लेखमा पहिले नै लिंक गरें। यसले वर्णन गर्दछ कि इटालीमा मरेकाहरूको died people% मानिसहरूसँग पहिले नै अन्य सर्तहरू थिए जसबाट उनीहरू मर्न सक्थे।
अब तपाईं भन्नुहुनेछ:ठीक छ र? के यो गलत छ? ऊ तब पूरै सहि छ !?“मैले माथि वर्णन गरें कि सुरक्षा जालहरूले झूट बोल्दैन। तिनीहरूले तपाइँलाई पूर्ण सत्य देखाउन पनि सक्छन्। सुरक्षा जालको उद्देश्य भनेको यो हो कि तपाईं विशेष विचार वा व्यक्तिको शरीरसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा त्यो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प हो।
यदि पछि यदि यो कुरा पत्ता लगायो कि डोनाल्ड ट्रम्पले गहिरो सफा गर्ने काम गरिरहेको छैन भने र यदि पछि उनीले पत्ता लगाए कि विश्व रोए कि डोनाल्ड ट्रम्पले उदाहरणका लागि इस्टरको अन्त्यमा अमेरिकीहरूलाई सडकमा छोडेर अत्यन्त ठूलो गल्ती गरेको छ (किनकि किनभने यदि, उदाहरणका लागि, कोरोनाभाइरस महामारी अचानक देखा पर्‍यो, तर धेरै हिंस्रक रूपमा) भने, तब डोनाल्ड ट्रम्पका जेनेसनसँगै आएका समर्थकहरू एउटा झडपमा डुबे। तब सबैले ती सबै शंकास्पदहरूलाई कारागारको लागि बोलाउनेछन् जसले कोरोना भाइरस कत्ति खतरनाक थियो भनेर हेर्न अस्वीकार गरे।
कृपया नोट गर्नुहोस्: मिडियाले पनि सम्भावित पुनः प्रकोप प्रचार गर्न सक्छ, तर तब सम्म तपाईं सुरक्षा नेट रणनीति र रॉबर्ट जेन्सेन माछा मार्ने जाल को उर्जा को माध्यम बाट आलोचनात्मक सोच्न स्वतन्त्र हुनेछैन। वास्तवमा, 'आलोचनात्मक सोच' तबसम्म सबैभन्दा खतरनाक मनोवैज्ञानिक अवस्था हो।
जेनेट ओस्सेबार्डसँग के गलत छ
यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि म व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण गर्न बाहिर छैन, किनकि म7बर्ष भन्दा बढी गर्दैछु। मलाई 'बेल्ट मुनि' मनपर्दैन। म अवलोकन गर्न एक रणनीति विरुद्ध चेतावनी दिन्छु। तथ्य यो छ कि त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले गोप्य रूपमा सेवाहरूको लागि काम गर्न सक्दछन् र आफूलाई सेफ्टी नेट प्यादाको रूपमा तैनाथ गर्न अनुमति दिन सकिन्छ हाम्रो आफ्नै विवेक र कर्मको प्रक्रिया गर्नका लागि।
जेनेट को लागी, यो स्पष्ट छ कि उनले क्यू अनन सिद्धान्तहरु आफ्ना भिडियोहरुमा प्रचार गर्छिन्। त्यसोभए उनी वास्तवमै तपाईंलाई फिर्ता बस्न र कुर्नुहोस् र के हुन्छ हेर्नुहोस् हेर्न प्रोत्साहित गर्दछ। ट्रम्पको उद्धार अनुमानित छ। मैले यस बारेमा पहिले नै लेखेको थिएँ dit en dit लेख
त्यसो भए हामी के गर्न सक्दछौं राम्रो विश्वास गर्नुहोस्, के अझै सकारात्मक छ?
ठ्याक्कै त्यो सोचाई त्यस्तो प्रभाव हो जुन तपाईंले निराशाको अनुभव गर्दा प्राप्त गर्नुभयो जब तपाईं सुरक्षा जालमा पर्नुभयो र सम्पूर्ण जहाज डूब्यो। यसैले म यो इशारा गर्दैछु कि यो तपाईंको चेतनाको बारेमा छ। र त्यो अर्को अर्थमा छ जुन रोबर्ट जेन्सेनले आफ्नो भर्खरको प्रसारणमा उक्त शब्द हाईज्याक गरे।
यो तपाईंको 'चेतना' को अर्थ हो 'तपाईंको अस्तित्वको मौलिकता' को अर्थमा
मेरो पुस्तकमा म वास्तविक जागरूकताको बारेमा कुरा गर्छु र म सबै समाहित भाइरसको बारेमा कुरा गर्दछु जसले हामीलाई यसको पासोमा पार्न चाहन्छ। मैले यसमा महामारीको पनि पूर्वानुमान लिएँ, किनकि हामी अहिले यसलाई अनुभव गरिरहेका छौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तथापि, म वर्णन गर्दछु कि हामी शारीरिक स्तरमा धेरै प्राप्त गर्न सक्दैनौं। के तपाई वास्तवमै सोच्नुहुन्छ कि यदि सबै किसानहरू सडकमा लाग्छन् वा हामी सबै मास्सामा सुतेका छौं भने हामी केहि परिवर्तन गर्न सक्दछौं? राज्यले आफैंमा यो देखाइसकेको छ कि त्यसले तिनीहरूलाई प्रभावित नगरी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था बन्द गर्न सक्छ।
के हामी गर्न सक्छौं र के गर्न सक्दछौं हाम्रो उद्धारमा आउने बाहिरी व्यक्तिहरूको अपेक्षाहरू भन्दा बढ्ता; क्यू अनन र ट्रम्प हाम्रो उद्धारमा आउनेछ भन्ने आशालाई बढी छ। हामी के गर्न सक्दछौं धेरै ठूलो छ! हामी के गर्न सक्दछौं तपाईंको मूल रचनात्मक शक्ति पहिचानको बारेमा। म यो पुस्तकमा व्याख्या गर्छु। तपाईं त्यो किन्न सक्नुहुन्छ। तपाई यसलाई धेरै लेखहरुमा नि: शुल्क पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, तर किनकि तपाई घरमै हुनुहुन्छ र किनकि तपाईसँग पढ्ने समय छ; किनभने तपाईं आफ्नो वास्तविक शक्ति पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ; किनकि हामी डरलाई जित्न सक्छौं र किनकि हामी सोच्न भन्दा बढि सक्षम छौं: त्यसैले यो सारांश पढ्नको लागि सम्भावना:
नोट: पैसा कमाउनको लागि पुस्तक बिक्रीको खोजीमा भर्खरका दिनहरूमा केही पटक मेरो आलोचना गरिएको छ। यस पुस्तकलाई पाठकहरूको अनुरोधमा लेखिएको थियो हालसालैका वर्षहरूका लेखहरू (पढ्न स्वतन्त्र) लाई बन्डल गर्नको लागि जुन एक दिनमा पढ्न सकिन्छ।
स्रोत लिङ्क सूची: थ्रेड्रेडेराप.कॉम, businessinsider.com, bloomberg.com
कोरोनाभाइरस कोविड -१ lock लकडाउन अपडेट: जब तपाईं उठ्नुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं फस्नुभयो, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
कृपया नोट गर्नुहोस्: कोविड १ Jan जेनेट ओसेटबारार्ड (Ninefornews) वृत्तचित्र एक नक्कली समाचार जाल हो
Coronavirus COVID-19 pandemic: भाइरस, bioweapon वा होसेट वित्तीय रिसेट र एक सम्पूर्णवादी नियन्त्रणको लागि?
बिल गेट्स 'क्वान्टम डट्स' वायरलेस आईडी कार्ड जसले तपाईंको कोरोनाभाईस छ वा छैन र पनी तपाईंको खोप लगाइएको छ भनेर ट्र्याक राख्दछ।
कोरोनाभाइरस, मानव समाजलाई कडा बनाउने वा प्राप्त गर्ने समाज?
ट्याग: anon, गहिरो, विशेष, जेनेट, जेन्सेन, सफा गर्नुहोस्, बैज-दाह्री, Q, रबर्ट, ट्रम्प, सुरक्षा नेट, सुरक्षा शुद्ध प्यादा
25 मार्च 2020 मा 19: 30
यो असम्भव देखिँदैन कि जेन्सेनले आज रातको आफ्नो प्रसारणमा ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सनोरोलाई पदोन्नति गर्ने छ
नोट गर्नुहोस् कि यो दुई शिविर रणनीति र सुरक्षा नेट सिद्धान्तको अंश हो। त्यसोभए: कोरोनाभाइरस वा जसले सबै कुरा ठीकठाक हुनेछ भनिरहेछ भनेर इन्कार गर्नेहरूलाई चाँडै नै कडा सजाय दिइनेछ किनकि भाइरसको पुनरुद्धारले गर्दा (कम्तिमा यो मिडिया र राजनीतिले आंकडा मार्फत कडा मिहिनेत देखाइरहेको छ)। तब सबै "समालोचकहरू" उत्साहित हुन्छन्। पुन: शिक्षा शिविर, जेल सजाय, आदि को बारे मा सोच्नुहोस्।
ट्रम्प र बोलसनो यस खेलको हिस्सा हुन्। इस्टर पछि महाभियोग ट्रम्प अपेक्षा गर्न एक उचित तर्कसंगत विकल्प देखिन्छ।
25 मार्च 2020 मा 22: 25
भर्खरै जेन्सेन प्रसारण हेर्नुभयो र मेरो दूरदर्शिता सत्य साबित भयो… (:35 25:२:XNUMX मिनेट।)
25 मार्च 2020 मा 20: 01
तपाईं सत्य हुनुहुन्छ कि तिनीहरूले सत्यहरू मिसाउँछन्।
म निश्चित छु कि सबै अहिले आध्यात्मिक स्तरमा भइरहेको छ। धेरै व्यक्ति यो सबै याद गर्न को लागी याद गर्दछ। एकचोटि तपाइँ कामबाट स्वतन्त्र भए पछि हामी नेटफ्लिक्स, तनाव र भाइरसमा डुब्दछौं।
आफैलाई बन्द गर्नुहोस्, अनप्लग गर्नुहोस्, किक अफ गर्नुहोस्, डिस्चार्ज गर्नुहोस् र उच्च स्तरमा जानुहोस्।
ह्यारी फ्रिज लेखे:
25 मार्च 2020 मा 20: 38
यो कहिलेकाँही पूर्ण निराश हुनु हो। इ England्ल्यान्डका प्रिन्स चार्ल्सका साथै अब कोरोना पनि छ (म उनलाई चाँडै पनि हार्दिक शुभकामना दिन्छु)।
कोरोना भएका ज्ञात व्यक्तिहरूको संख्या अब 1० मा १ हुनुपर्दछ। तर मानिसहरूलाई यो एकदम सामान्य लाग्दछ किनकि उनीहरू मिडियामा मृत्युमा फ्याँकिएका छन् (तथ्या never्कले केही फरक पार्दैन !!!) उदाहरणका लागि विश्वव्यापी (एमएसएमका अनुसार) मान्छेको संख्या जसको जस्तो देखिन्छ। यो एमएसएमको अनुसार लगभग ,50००,००० हो
Figure%% मानिसहरु जसले यो फिगर देख्छन् महसुस गर्दैनन् यसको मतलब के हो। यदि विश्वव्यापी 98००,००० मानिससँग कोरोना छ भने यसको अर्थ संसारमा १ 400.000,००० मध्ये १ जनाले वास्तवमा कोरोना पाएका छन् !!!
मेरो भाई र केहि अन्यसँग जो खुशीसाथ जागिरहेका छन्, मैले एक सानो सर्वेक्षण गरे जसमा लगभग १०० भन्दा माथि औसत बौद्धिक मानिस थिए, उनीहरूलाई सोधेर अन्य कुरा पनिः
विश्वमा कोरोना संक्रमणको कुल संख्या 400.000००,००० हो। यो जनसंख्याको कति प्रतिशत हो?
औसत उत्तर थियो (विश्वास गर्नुहोस् कि नगर्नुहोस्) कि ,400.000००,००० मानिस १% र विश्वको १०% जनसंख्या बीचको थियो। १०० मध्ये २ जनाले मात्र सही जवाफ दिए।
यसको मतलब जब औसत डचम्यान (र अन्य देशका मानिसहरू पनि सुन्छन्) ले विश्वव्यापी रूपमा लेखिएको 400.000००,००० कोरोना संक्रमणको स he्ख्या सुन्छ वा देख्छ, ऊ वा उनी सोच्छिन् कि यो विश्वमा व्यक्तिहरूको एक धेरै ठूलो प्रतिशत हो (वाव पहिले नै १% वा विश्व जनसंख्याको%% को क्यारोना छ, यो कसरी खतरनाक छ)।
मैले यसलाई जैयर बोलसेरानोबाट पनि देखें। रमाइलो कुरा के भने पुतिनले रुसमा बिल्कुल विपरीत धारणालाई प्रमोट गर्ने अनुमति पाएका थिए: पुतिन भन्छन कि यो एकदम खतरनाक छ र रुसीहरूले बिग ब्रदरको निर्देशनलाई ठीकै पछ्याउनुपर्दछ र एक अर्कोलाई ध्यान दिएर हेर्नु पर्छ (पुतिन रुट्टको बारेमा उस्तै भन्छन्)
किन लगभग सम्पूर्ण विश्व जनसंख्या सुते? तिनीहरू लुसिफेरियन सम्भ्रान्त द्वारा मंत्रमुग्ध भएको जस्तो देखिन्छ। पक्कै पनि एक छोटो सोच्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ र को गणना गर्न को लागी संसारमा कसैको पनि कोरोना छैन? (प्रख्यात व्यक्ति बाहेक, प्रायः सबैमा कोरोना देखिन्छ)।
25 मार्च 2020 मा 21: 32
तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले "विज्ञहरू सुन्नुहोस्" 😉
जे भए पनि ... नम्बरहरू संख्या हुन् किनभने मिडिया र राजनीतिले हामीलाई ती नम्बरहरू बताउँछ। Trumanshow? तिमीलाई थाहा छैन।
हामीलाई के थाहा छ कि मान्छेहरूले स्थिति लिन्छन् कि घडी वृद्धिमा तपाईंले सुरुमा थोरै संख्या देख्नुहुन्छ जबसम्म घुमाउनको बाँण एर्रोको रूपमा माथि तर्दैन।
यो संख्या वा प्रतिशत वा वक्र मा मानिसहरूलाई केन्द्रित गर्न को कुनै उपयोग छैन।
यो वास्तविकतामा मानिसहरूलाई केन्द्रित गर्न उपयोगी छ जुन हामीले यसलाई बुझ्यौं।
26 मार्च 2020 मा 02: 51
के मैले एक पटक थाहा पाएँ / मेरो "शिक्षा" PR- सार्वजनिक सम्बन्ध मा सिकेका ती आंकड़े - वा तथ्या statistics्कहरू यसलाई राम्रोसँग भनिएको थियो - सँग स्पिन गर्न उपयुक्त साधन (साधन) हो। सार्वजनिक सम्बन्ध = खेल / दर्शकलाई कताई। नम्बरहरूको साथ तपाईं प्रत्येक व्यक्तिगत अवस्था / परिस्थिति / व्यक्तिलाई पा in्ग्रामा बोल्न गर्न "कम" गर्न सक्नुहुन्छ। एक औसत, तपाईं मानवीय मान हटाउनुहोस्। संख्या Dehumanize। फिगर सुन्नका लागि साधन हुन्। आजको टेक्नोक्रेसीले केवल २ अंकहरू प्रयोग गर्दछ - शून्य र एउटा एउटा वास्तविकता सिर्जना गर्न। ओभरले सिर्जना गर्न।
यो कुनै कारण बिना नै हो जुन हामीले आंकडाको बारेमा भन्छौं कि त्यसले हामीलाई चक्कर आउँदछ। अर्को शब्दमा तपाईले आफ्नो अभिमुखीकरण गुमाउनुहुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो अभिमुखीकरण हराउनु भएको छ भने, तपाईंले केहि पनि हराउनु हुने छ, अर्थात् प्रसंग / फ्रेमवर्क।
यदि तपाईंसँग रूपरेखा / प्रस have्ग छैन भने, तपाईं परिभाषा द्वारा अरूको हात मा एक खेलौना हो।
नम्बरहरू प्रतीकहरू हुन्, संचारको एक अचेतन तरीका (अवचेतन दिमागको साथ)। यी सबै तथ्या fact्कहरू वास्तवमा खाली छन्, तिनीहरूले केहि गर्दैनन्, तर एकै साथ उनीहरूले आन्तरिक भित्र सबै कुरा भने। हामी अब त्यस्तो समयमा आइपुगेका छौं जब कहानी (स्पिन, स्पीन) लाई डिसेफर गर्नु हाम्रो काम हो।
अ word्ग्रेजी शब्द संख्याहरू तुलना गर्नुहोस् जुन तपाईंले पहिले देख्ने (अनुहार मान) शंकाको भन्दा बढी बताउनुहुन्छ। सुन्न सुन्न छ संख्या / संख्या भावना (= कम भावनाहरू) सक्रियता को लागी एक भेक्टर हो (बेहोशी) लाई ध्यान दिए बिना कि यदि तपाईं एक दीक्षा हुनुहुन्न। शिक्षा प्रणाली को लागी ठीक डिजाइन गरिएको छ। नम्बरहरू / संख्याहरू हामीलाई एउटा मात्र फारममा, खाली फारममा प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसकारण हामीले विश्वव्यापी ज्ञानबाट विच्छेदन गर्न "गणना गर्न सिक्नु" पर्छ। जे होस्, त्यो अर्को गहिरो कथा हो। आशा छ कि तपाइँ यससँग सहमत हुनुहुन्छ र यसलाई सोच्नुहोस्।
26 मार्च 2020 मा 07: 04
उदाहरण को लागी, कसैलाई कुराकानी सम्मोहन अन्तर्गत राख्नको लागि (जसमा मानिसहरूले टिभी वा युट्यूब च्यानल हेर्न रुचाउँछन्), प in्क्तिमा केही चित्रहरू सूचीबद्ध गर्नु उत्तम हुन्छ। यसले तपाईंको सचेत विचार प्रक्रियाहरूलाई भ्रमित गर्ने प्रभाव गर्दछ। उनीहरूले प्रयास गरे जस्तै ठूलो स or्ख्या वा हिसाबलाई पछ्याउन कोशिस गर्छन्, तर किनभने तपाईंको मस्तिष्कलाई समस्या समाधान गर्न "होशियार रहनु" छ, स्पिकरले तपाईको चेतनालाई त्याग्छ र लंगर बिछ्याएर तपाईको अवचेतन मनलाई प्रोग्राम गर्न सक्छ।
मास्टर कम्युनिकेटर (वा एनएलपी विशेषज्ञ) रोबर्ट जेन्सेनले पनि यो प्रविधिको प्रयोग गर्दछ।
तपाईंले यसलाई जेरोइन पाउ जस्तै व्यक्तिहरूमा पनि देख्नुहुनेछ। तपाईंसँग एनएलपी र कुराकानी सम्मोहनमा बहुविध तकनीकहरू छन्, तर तथ्या and्क र संख्याहरूले राम्रोसँग गरिरहेछन्।
यसैले तपाईंसँग जर्नलको अन्त्यमा मौसम पूर्वानुमान सधैं हुन्छ। तब तपाईले नम्बरहरू देख्नु हुनेछ र तपाईलाई नक्शामा पछाडि र तल फालिनेछ। तपाईं नक्शा बाहिर अतिरिक्त हुनेछ (सम्मोहित)
25 मार्च 2020 मा 20: 58
फ्लू तरंगको अन्त्य!
अर्को तरंग आउँदैछ!
25 मार्च 2020 मा 23: 38
त्यसोभए यदि मैले सहि देख्दछु, २०२० मा ११ हप्ता पछाडि हामीसँग आधार रेखा भन्दा कम मृत्यु दर छ?
26 मार्च 2020 मा 07: 37
"तपाइँ कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ कि म नियन्त्रणित विपक्षी फ्रील्यान्ड हुँ? म मोबाइल घरमा बस्छु र म तपाईंलाई मेरो बैंक खाता देखाउने छु। ” ठिक जेनेट, मलाई तपाईंको बैंक खाता देखाउनुहोस् र त्यसपछि त्यो अन्य बैंक खाता देखाउनुहोस्।
"यदि मैले भर्खरै मलाई कल गरेको भए, म यो समायोजित गर्ने थिए"
र सूची Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) पोस्ट अन्तर्गत Vrijland जलाउन सामान्य दुर्व्यवहारको साथ प्रतिक्रिया गर्दछ (किनकि उनीहरू व्यावहारिक रूपमा प्रत्येक ब्लग र सबै सोशल मिडियामा गर्छन्; यो उनीहरूको काम हो)।
अवश्य पनि जेनेटले मेरो आलोचनाको परिणाम स्वरूप उनको भिडियोहरू समायोजित गर्‍यो। यदि मैले "भर्खरै उसलाई बोलाएको" भनेको थिई, उसले भर्खरै extensive बृहत्तर Q अनन प्रचार भिडियोहरू अफलाईनमा लगेर नयाँ बनाउँथ्यो र उनको पूरै कथा अनुकूलित गर्‍यो। हो जेनेट, हैन? पाठ्यक्रम को फोल्डर। यो राम्रोसँग विचार गरीन्छ, राम्रोसँग तयार छ र Q Anon प्रमोशन ठीक समयमा सुरू भयो।
« कोरोनाभाइरस कोविड -१ lock लकडाउन अपडेट: जब तपाईं उठ्नुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं फस्नुभयो, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
इटालियन मेयरले कोरोनाभाइरससँग लड्न फ्लेमथ्रोभर्स पठाउने धम्की दिए »
कुल भ्रमण: 1.186.089
के विपरीतलिंगी पुरुषहरू कोरोनाभाइरसको मुख्य लक्ष्य हो? वैज्ञानिक आधार
इटालियन मेयरले कोरोनाभाइरससँग लड्न फ्लेमथ्रोभर्स पठाउने धम्की दिए
ह्यारी फ्रिज op के विपरीतलिंगी पुरुषहरू कोरोनाभाइरसको मुख्य लक्ष्य हो? वैज्ञानिक आधार
भविष्यमा op के विपरीतलिंगी पुरुषहरू कोरोनाभाइरसको मुख्य लक्ष्य हो? वैज्ञानिक आधार
क्यामेरा2op भविष्यवाणी: कोरोनाभाइरस रोक्नको लागि आपतकालीन लकडाउन (विध्वंस विध्वंस र लुटेको नियन्त्रण)
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op के विपरीतलिंगी पुरुषहरू कोरोनाभाइरसको मुख्य लक्ष्य हो? वैज्ञानिक आधार
मार्टिन भिजल्याण्ड op के विपरीतलिंगी पुरुषहरू कोरोनाभाइरसको मुख्य लक्ष्य हो? वैज्ञानिक आधार
यो पपअप बन्द हुनेछ:
के तपाईंले आफ्नो पुस्तक समाप्त गर्नुभयो र तपाईंलाई केहि थप जानकारी चाहानुहुन्छ?